काठमाडौंमा तत्लकाल लकडाउन खुकुलो नहुने प्रस्ताब !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/काठमाडौंमा तत्लकाल लकडाउन खुकुलो नहुने प्रस्ताब !!
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न ठाँउको अवस्था हेरी लक-डाउनबारे नयाँ मोडालिटि अपनाउँने भएको छ। सोमबार सिंह-दरबारमा बसेको कोरोना रोकथाम तथा न्यूनी-करण गर्न गठित उच्च स्तरीय समितिको २२ औं बैठकमा लक-डाउनको मोडालिटीबारे छलफल भएको छ।
अवस्था हेरेर अन्य ठाँउमा लक-डाउन खुकुलो पार्नेबारे छलफल भएपनि काठमाडौँमा तत्काल खुकुलो नगर्न नगर्ने प्रस्ताव आएको छ। समितिको बैकठमा कम जोखिम रहेका जिल्लाहरुमा लकडाउन खु-कुलो पार्नेबारे पनि छलफल भएको छ। समिति बैठकमा सोमबार छलफल भएपनि सरका`रलाई अन्ति`म सिफा`रिस दिन फेरि मंगलबार बैठक बस्ने छ।
मंगलबारको सिफा`रिस-पछि मन्त्रि-परिषद् बैठकले अन्तिम निर्णय गर्ने छ। बैठकले गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई लकडाउनको मोडालिटी कस्तो बनाउने भनेर खाका तयार गर्न निर्देशन दिएको छ। सरकारले पछिल्लो समय बढाएको लकडाउनको समयावधी बैसाख २५ गते सकिँदे छ। भोलिको बैठकले लकडाउन थप्नेबारे पनि निर्णय गर्ने छ।
अवस्था हेरेर अन्य ठाँउमा लक-डाउन खुकुलो पार्नेबारे छलफल भएपनि काठमाडौँमा तत्काल खुकुलो नगर्न नगर्ने प्रस्ताव आएको छ। समितिको बैकठमा कम जोखिम रहेका जिल्ला`हरुमा लक`डाउन खु-कुलो पार्नेबारे पनि छलफल भएको छ। समिति बैठकमा सोम`बार छलफल भएपनि सरकारलाई अन्तिम सिफा`रिस दिन फेरि मंगलबार बैठक बस्ने छ।
मंगलबारको सिफारिस-पछि मन्त्रि-परिषद् बैठकले अन्तिम निर्णय गर्ने छ। बैठकले गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रा`लयलाई लक`डाउनको मोडालिटी कस्तो बनाउने भनेर खाका तयार गर्न निर्देशन दिएको छ। सरकारले पछिल्लो समय बढाएको लक`डाउनको समया`वधी बैसाख २५ गते सकिँदे छ। भोलिको बैठकले लकडाउन थप्नेबारे पनि निर्णय गर्ने छ।